Maapụ Barcelona - Maapụ BCN niile maka ndị njem | Njem zuru oke
Daniel | | Barcelona
Ọ bụrụ n’ị na-aga gaa Barcelona Obi abụọ adịghị ya na ị ga-achọ maapụ iji gbaa gburugburu ma gaa na ebe nlegharị anya niile nke obodo ahụ. Ebe i nwere ike ịhụ na ibudata na isi map nke Barcelona inwe ike ịgagharị n’obodo ahụ n’ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe.
Barcelona bụ otu n'ime ebe ndị njem nleta kachasị mkpa n'ụwa. Kwa afọ ọtụtụ nde ndị njem nleta na-eleta ya na-achọ ọdịbendị na ntụrụndụ. Iji chọpụta ihe niile facets na nzuzo nkọwa nke a mara mma Catalan na Spanish obodo, na map na anyị gosiri gị n'okpuru ga-enyere gị aka nke ukwuu. Enwee obi ụtọ ịnọ na Barcelona!
1 Ilu Barcelona site na mpaghara
2 Map nke Barcelona site na agbata obi
3 Maapụ Barcelona: Transportgbọ njem
3.1 Obodo metro Barcelona
3.2 Barcelona map uzo
3.3 Barcelona njem ụgbọ ala ụgbọ ala ụzọ
4 Barcelona map okporo ámá
5 Barcelona na ama gị
6 Virtual maapụ nke Barcelona
Ilu Barcelona site na mpaghara
Barcelona nwere ọnụọgụ ndị 1,6 nde bi na ya (Nde mmadụ 3,3 gụnyere obodo ukwu), ndị bi na otu n'ime mpaghara iri si n'obodo. E kekwara mpaghara ndị a n'otu mpaghara.
Barcelona district map
Mpaghara kachasị amasị ndị njem nleta bụ anọ dịdebere oke osimiri: Sants-Montjuïc, L'Eixample, Ciutat Vella y Sant Martí. Na anọ ndị a anyị kwesịrị ịgbakwunye district nke Obere Obodo, ebe Camp Nou dị, na FC Barcelona stadium (otu n'ime ebe nlegharị anya nlegharị anya nke isi obodo Catalan).
Map nke Barcelona site na agbata obi
Onye ọ bụla nke 73 agbata nke e kewara okwu ọchịchị obodo nke Barcelona nwere akara ngosi akọwapụtara nke ọma na njirimara nke ya. Otú ọ dị, site na ndị njem nleta, ụfọdụ na-adọrọ mmasị karịa ndị ọzọ.
Barcelona agbata obi map
En Barceloneta, nkeji iri na azụ nke ndị ọkụ azụ, bụ Akwarium, nke Zoo na ndị a ma ama Maremagnum. Ọ bụkwa ama maka ụlọ nri mara mma.
na Barri Gotic odịbe ochie obodo, na oghere dị ka ihe atụ dị ka Las Ramblas na Ogige Catalonia, tinyere ụlọ ndị a ma ama dị ka Katidral.
En Raval ụlọ ahụ mara mma na-echere anyị Ahịa La Boquería, ezigbo oriri maka uche ise.
En Ribera ndị dị oké ọnụ ahịa na-ebili Basilica nke Santa Maria del Mar.
En Poblenou ahụ ihe Ọdụ ụgbọ mmiri Olympic, otu n’ime ebe ezumike dị ukwuu n’obodo ahụ.
En Ndị Marina del Prat Vermell anyị nwere ike iji ụgbọ ala USB gbagoo n'elu nke Ïlọ Montjuïc, na-agagharị na Ederede Espanyol ma gaa na Ama egwuregwu Olympic, na ihe ndị ọzọ.
Na mpaghara nke Grace ụfọdụ ụlọ ihe atụ kacha eji eyi ọha ọhụụ bụ nke ewubere ma wuo ya Antoni Gaudí: na Casa Batlló, La Pedrera ... Ma karia ihe nile Ezinụlọ Dị Nsọ, eluigwe na ala akara ngosi nke obodo, na Parc Guell. Gracia bụkwa ezigbo agbata maka ụlọ ahịa.
En Ndi umuaka bụ Ime Anwansi nke Montjuïc ya na ìhè na mmiri show, na ọ dịghị njem nleta na-atụ uche.
Ndepụta a bụ naanị obere ndepụta nke ntụnye, n'ihi na Barcelona nwere ọtụtụ ihe iji nye ndị ọbịa ya.
Maapụ Barcelona: Transportgbọ njem
Obodo metro Barcelona
Iji gafere obodo ahụ wee rute ebe ndị a na ebe ndị ọzọ, o doro anya na metro bụ ụzọ kachasị baa uru na akụ na ụba. Na Barcelona metro O nwere uzo asatọ na ulo oru 161 gbasasiri n’elu nnukwu obodo ya.
Barcelona map uzo
Nhọrọ ọzọ na-adọrọ mmasị maka ịgagharị obodo ahụ bụ ịgba ịnyịnya ígwè. Na Uzo uzo Ọ kwụsịbeghị itolite n'afọ ndị na-adịbeghị anya, na-ewu netwọkụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 300.
Netwọk nke ụzọ ụgbọ ịnyịnya na Barcelona
Barcelona njem ụgbọ ala ụgbọ ala ụzọ
Iji hụ ihe ndị dị mkpa na obodo ahụ, ọtụtụ ndị njem na-ahọrọ ịgbago Barcelona njem nleta. Na ụzọ ya, ụgbọ ala a panoramic na-akwụsị na isi ncheta na ebe mmasị na isi obodo Catalan. Nke a bụ ihe ọzọ na maapụ Barcelona nke ga-akacha baara gị uru n'oge ịnọ n'obodo.
Njem njem nlegharị anya nke Barcelona
Ver también: Nduzi ndi njem ndi Barcelona.
Barcelona map okporo ámá
Ọ bụrụ n’ị na-achọ otu okporo ụzọ, anyị na-akwado ka ị jiri map okporo ụzọ nke Google Maps nyere. Pịa ebe a iji nweta ọrụ ahụ ozugbo Maapụ Google nke Barcelona.
Barcelona na ama gị
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe a Maapụ Barcelona maka ama gị, na mgbakwunye na ntuziaka zuru oke na burukwa na akụrụngwa nke Barcelona, ​​anyị na-akwado ka ị budata ngwa mkpanaka ị nwere ike ịchọta na peeji nke Council nke Barcelona.
Virtual maapụ nke Barcelona
Ndị isi obodo Barcelona na-enye onye ọ bụla obere ngwa ga-enyere gị aka ifefe obodo ahụ wee hụ ezigbo foto nke isi okwu ọ bụla n'obodo ahụ. Ngwa dị ukwuu iji chọpụta Barcelona, ​​chọọ ebe na adreesị na-akpaghị aka ma nwee echiche ziri ezi banyere isi ihe ọ bụla na Barcelona.
Nweta akara ngosi maapụ nke Barcelona
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Maapụ Barcelona
Ogige ntụrụndụ na ọdịdị dị na Colombian Amazon